AWDHEEGLE, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha howlagal gaar ah oo ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan DANAB ay ka fuliyeen 4-tii bishan gobolka Shabeellaha Hoose.
Howlgalkan ayaa ahaa mid dhulka iyo cirka isagu jira, oo ciidamada huwanta ay ku qaadeen habeenkii Talaadada goob Al-Shabaab canshuuraha ku qaado, oo ku yaalla Awdheegle, waxaana lagu dilay afar dagaalyahan oo kooxdan katirsan.
War qoraal ah oo kasoo baxay AFRICOM - Taliska Mareykanka ee Africa ayaa lagu sheegay in duqeynta ay timid kadib markii ciidamada dhulka ay halis geliyeen dagaalyahanada Al Shabaab, oo iska-caabin muujiyay markii duulaanka lagau qaadey.
Warka AFRICOM ayaa lagu xaqiijiyay inuusan jirin khasaare shacabka kasoo gaarey howlgalka Awdheegle.
Al-Shabaab oo dhankeeda ka hadashay duqeynta ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ay labo gantaal ay ku dhufteen goob suuq ah iyo guri shacab ay degan yihiin, waxaana ay beenisay in 4 xubnood looga dilay weerarka.
In ka badan 38 duqeyn ayaa diyaaradaha Mareykanka ka fuliyeen Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadkan oo kaliya.
Howlgalkan ayaa kusoo begemay xilli shalay dowladda Mareykanka sheegtay in 28 sano kadib ay dib usoo celisay joogitaankeeda dimlomaasiysadeed ee Soomaaliya, waxayna usoo dirtay safiir cusub, inkastoo aan lasoo wareejin safaaradda Nairobi.
Dowladda Federaalka ayaa ku tilmaantay dadkii lagu dilay howlgalka inay ahaayeen...